Malagasy - PM Proofreading
PM Proofreading dia mpamatsy tolotra manadihady manerantany
PM Proofreading Services dia mitarika mpanome tolotra fanitsiana sy fanitsiana napetraka tamin’ny taona 2012. Manolotra ny serivisy fanaovan-tsika fanoratanay ho an’ny mpampianatra, mpikaroka akademika, mpianatra postgraduate, diary, oniversite, orinasa ary manam-pahaizana amin’ny indostria amin’ny sehatra manerantany. Ny serivisinay dia azo antoka ho azo itokisana, ary ny rafitray mandrindra dia azo antoka sy tsiambaratelo mba hisian’ny fandriam-pahalemana tanteraka. Ny valin-kafatra avy amin’ny mpanjifa iraisam-pirenena miverina dia mampiseho ny lazantsika ho an’ny taha ambony amin’ny kalitao sy mahomby ary mahomby.
Ny fizotry ny famoahanay
Ny fizotrantsika dia mirakitra ny fanitsiana (tsipelina / fanoratana, fitsipi-pitenenana) ary fanitsiana (firafitry ny fehezanteny, fiaraha-mientana ary fivezivezena, fampiasana mazava sy mazava ny fiteny, terminolojia / feo akademika. Manosihosy ny sora-tananao izahay ary manamboatra azy amin’ny famoahana na fanontana. Izahay dia manara-maso ny fanovana rehetra natao tamin’ny asanao, mba hahafahanao mijery ny fanovana rehetra natao ary hisafidy ny hanaiky na handà ny fanovana tsirairay. Na ny kinova fanovana narahina na ny kinova farany an’ny sora-tànanao dia alefa aminao. Manampy ny hevitrao koa izahay amin’izay mety hanatsara ny fanoratanao. Ny fanamarinana farany momba ny kalitao henjana farany dia tanterahin’ny mpanamarina fanindroany hahazoana antoka fa averina tsy misy hadisoana ilay sora-tanana.
Ireo mpandinika ny teny anglisy anay
Ny ekipanay dia misy manam-pahaizana momba ny lohahevitra, miaraka amin’ny mari-pahaizana mandroso amin’ny Master sy ny PhD ambaratonga ambony. Ny proofreader rehetra dia miavaka amin’ny fifehezana manokana, ary manitsy sora-tanana ao anatin’ny faratampony misy azy ireo manokana. Amin’ity fomba ity ny proofreader dia afaka manova ny sora-tanana amin’ny fomba tsara indrindra, satria fantany ny teny fototra sy ny voambolana manokana ampiasaina amin’io sehatra io. Misy ny mpanohana ny famakiana isaky ny fifehezana.
Manana traikefa fanitsiana nandritra ny taona maro izy ireo, ary manana ny fahaiza-manao takiana amin’ny famerenana amin’ny laoniny tsara ny asanao amin’ny fahalavorariana, ary sady mitazona ny dikany no tiana hikitika anao manokana. Ny mpikambana ao amin’ny ekipanay dia samy manaraka ny fizotrany fandraisana mpiasa voafantina voafantina ary manaraka ny fizotran’ny fanamarinana azo antoka azo antoka toy ny nampiasan’ny ‘Chartered Institute of Editing and Proofreading’ (CIEP). Ny sasany amin’ireo mpikambana ao amin’ny ekipanay dia voatanisa etsy ambany.
Fiaraha-miasa amin’ny Oniversite manerantany
Niara-niasa mivantana tamin’ireo mpianatra nahazo diplaoma, mpampianatra ary mpiasa akademika avy amin’ny Oniversite tamin’ny ambaratonga manerantany isika hatramin’ny taona 2012. Azafady mba mifandraisa aminay raha te hiara-hiasa aminay ianao.